Ronald Koeman oo ka hadlay guushii ay Barcelona ka gaartay kooxda Sevilla – Gool FM
(Sevilla) 27 Feb 2021. Tababaraha Barcelona ee Ronald Koeman ayaa ka soo muuqday shirkiisa jaraa’id si uu uga hadlo guushii ay kooxdiisa kaga gaartay Seville horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Barcelona ayaa saddexda dhibcood ka soo heshay kooxda Sevilla oo ay ku booqatay Estadio R. Sanchez Pizjuan, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-2, kulan qeyb ka ahaa horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Haddaba macalinka reer Holland ee Ronald Koeman ayaa ciyaarta kaddib u sheegay warbaahinta:
“Maanta waxaan bedelnay shaxda kooxda, Ousmane Dembele waxaan ka ciyaarsiinay weerarka, daqiiqado markey ka soo wareegatay, waxaan u baahanahay ciyaaryahan dhakhso badan, sidaas darteed waxaa soo galay Braithwaite, ee ma uusan aheyn Antoine Griezmann.”
“Griezmann oo kursiga keydka fadhiya ma ahan ciqaab, laakiin waa bedelida nidaamka, marka kooxda maskax ahaan ay diirada saarto, qof walbana uu nala socdo, dhib malahan cidda ciyaareysa, haddii aan sameyno soo laabasho Arbacada, waxaa isbadeli doono xilli ciyaareedkeena, gebi ahaanba wuu is beddeli doonaa.”
“Arbacada Copa del Rey, waxay noqon doontaa ciyaar kale, labada kooxoodba waxa ay ka shaqeyn doonaan sidii ay horumar u samayn lahaayeen, haddii aan muujino isla hamiga maanta, oo aan ciyaarno kulan kale oo buuxa, waxaan heli doonaa fursado badan.”
“Waxa ugu muhiimsanaa maanta waxay aheyd hamiga kooxda, maanta waxaan u dagaalanay isla markaana cadaadis ku sameynay koox ahaan, maskaxda aad ayey u fiicneyd, waxaan cadaadinay 95-kii daqiiqo oo dhan, tanina waxay sharraxaysaa wax walba.”
Horudhac: Leicester City vs Arsenal... (Rikoorrada u gaarka ah kulankan oo u xaglinaya The Foxes)